क्रिकेटर महेन्द्रसिंह धानीले किन सैन्य पोशाकमा पद्म भूषण लिए ? - Everest Dainik - News from Nepal
क्रिकेटर महेन्द्रसिंह धानीले किन सैन्य पोशाकमा पद्म भूषण लिए ?
नयाँदिल्ली, चैत्र २० । इडियालाई विश्वकप जिताउन सफल भएको भारतीय क्रिकेट टोलीलाई भारतको सम्मानित पदक ‘पद्म अवार्ड’ ले सम्मान गरिएको छ ।
तर आचाश्यजनक कुरा यो छ की भारतीय क्रिकेट टोलीका तत्कालीन कप्तान महन्द्रसिंह धानीले उक्त अवार्ड सैन्य पोशाक लगाएर ग्रहण गरे । त्यसपछि मानिसहरुमा जिज्ञाशा पलायो आखिर किन सैन्य पोशाकमा अवार्ड लिए त धानीले ?
याे पनि पढ्नुस विराट नयाँ कीर्तिमान नजिक, धोनीको रेकर्ड तोडिने सम्भावना प्रबल !
कारण यस्तो छ की महेन्द्रसिंह धोनीलाई भारतीय सेनाको मानार्थ लेफ्टिनेन्ट कर्नलको उपाधि प्रधान गरिएको छ । त्यसैले धोनी अवार्ड वितरण समारोहमा सेनाको वर्दीमा उपस्थित भए ।
पद्म भूषण पुरस्कार लिन धोनीले सेनाको पोशाकमा सैनिक जस्तै मार्चपास गर्दै उपस्थित भएका भए । उनले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई सैल्यूट गरे अनि पुरस्कार लिए ।
याे पनि पढ्नुस भारतीय क्रिकेट टिमको कप्तानमा फेरि धोनी !
धाेनीकाे कप्तानीमा भारतले सन २०१५ मा विश्वकप क्रिकेटकाे उपाधि जितेकाे थियाे ।
ट्याग्स: Mahendra singh dhoni, Padma Bhusan